Mogadishu Journal » Real Madrid ayaa xaqiijisay qalliinka Ramos
Real Madrid ayaa xaqiijisay qalliinka Ramos
Sergio Ramos ayaa lagu soo waramayaa inuu wajahayo ilaa labo bilood garoomada ka dib markii uu maray qaliin jilibka ah.
Kabtanka Real Madrid Sergio Ramos ayaa qalliin looga sameeyay dhaawac ka soo gaaray meniscus, sida ay xaqiijisay kooxda.
Wararkii ugu horeeyay ee Spain ayaa sheegaya in daafaca dhexe uu garoomada ka maqnaan doono ilaa labo bilood ka dib qaliinka looga sameeyay jilibka bidix.
Taasi waxay la micno tahay in Ramos uu hubaa inuu seegi doono labada lug ee wareega 16ka Champions League ee Atalanta iyo kulanka Derby LaLiga ee Atletico Madrid 7da Maarso.
34 jirkaan ayaa garoomada ka maqnaa tan iyo markii uu ciyaaray 90-ka daqiiqo ee kulankii ay guuldarada 2-1 kala kulmeen Athletic Bilbao kulan ka dhacay Supercopa de Espana bishii Janaayo 14.
Maqnaanshihiisa, kooxda Zinedine Zidane ayaa la kulantay ceebtii Copa del Rey ee Alcoyano waxaana guuldarro 2-1 ah ka soo gaartay Levante kulan ka dhacay LaLiga ka dib markii ay 4-1 ku garaaceen Deportivo Alaves.
Dhamaan tartamada 2020-21 ka hor kulanka Sabtida ee Huesca, Madrid ayaa badisay kaliya 40 boqolkiiba kulamada la'aantii Ramos marka la barbardhigo boqolkiiba 61 markii uu ciyaaray.
Xaqiiqdii, waxay guuleysteen afar jeer waxaana laga adkaaday shan ka mid ah 10-kii kulan ee ay ciyaareen kabtankooda, iyagoo dhaliyay goolal kayar (1.5 marka la barbar dhigo 1.8) iyo in ka badan laga dhaliyay (1.3 marka loo barbar dhigo 1.0).
Tani waa saameynta Ramos ee ciyaartooda, celceliska kubad heysashada Madrid ayaa hoos uga dhacday 63.1 boqolkiiba ilaa 56 boqolkiiba maqnaanshihiisa, halka ay isku dayaan labo shuud oo kayar isla markaana ay ogolaadaan laba iskutallaabood oo kale ciyaar kasta.
Halyeeyga reer Spain ayaa dhaliyay 11 gool 35 kulan oo uu saftay LaLiga xilli ciyaareedkii hore madaama uu kooxdiisa ku dhiirrigeliyay hanashada horyaalka laakiin waxa uu dhaliyay kaliya labo gool 14 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkii 2020-21.
Mustaqbalkiisa wixii ka dambeeya xilli ciyaareedkaan wali ma cadda, iyadoo qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana la soo warinayaa inay xiiseynayaan saxiixiisa Paris Saint-Germain iyo Manchester United.
Ka dib markii ay la ciyaareen Huesca, Madrid waxa ay wajihi doontaa Getafe, Valencia iyo Real Valladolid ka hor lugta hore ee isreebreebka Europe ee Atalanta ee Bergamo 24ka Febraayo.
Guddiga lagu muransan yahay ee doorashada heer federaal oo War cusub soo saaray